Ihe Anyị Nwere Ike Learnmụta na Kanye, Taylor na Beyonce | Martech Zone
Wednesday, October 7, 2009 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Taa, agwara m otu CIOs ihe omume Technet. Ka m na-akwado maka okwu a ma na-ahazi ihe m ga-ekwu maka otu a, achọrọ m ịkụ ozi n'ụlọ na ụbọchị nchịkwa ga-eso anyị. Ọrụ anyị ugbu a dị ka ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na ndị na-ere ahịa bụ iji mee ka nkà na ụzụ rụọ ọrụ ma mee ka ọ metụta ndị ọzọ. Anyị enweghịzi ike ijikwa mkparịta ụka ahụ.
The foto site na Jason Decrow nke Associated Press na-ekwu ya niile. Kanye West bi na ụwa ebe ọ nweere onwe ya ikwupụta echiche ya n'ihu ọha. N'agbanyeghị oge ọjọọ ya na ihe mgbu ọ nwere ike itinye na Taylor Swift… Kanye na-eme ihe anyị niile bụ free ime ugbua. Nke a bụ ihe mmụta nye anyị niile. Anyi bi n’ime uwa ebe onye obula n’ime anyi nwere ike wuli elu n’elu ikpo okwu kwuo uche ya. Anyị niile nwere igwe okwu (ụfọdụ n'ime anyị nwere ìgwè mmadụ buru ibu karịa ndị ọzọ).
Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, nke a bụ ihe ụlọ ọrụ na-atụkarị ụjọ gbasara mgbasa ozi mmekọrịta… ọnwụ njikwa. Asusu bu na, kama itu egwu ya, ha nwere ike leverage ya. Nzaghachi Beyonce na iwe Kanye bụ inye Taylor Swift igwe okwu mgbe Beyonce nabatara ya ma nye ya ohere ka ọ gụchaa okwu nnabata ya. Beyonce kwere ka Taylor jiri oge ya mara amara, na enweghị mgbagha, a ga-echeta Beyonce maka achọghị ọdịmma onwe ya naanị. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ bụghị na ebumnuche mmekọrịta ọha na eze na-agagharị, ọ bụ amamiihe.
Azụmaahịa gị ga-abanye na Kanye n'oge na-adịghị anya. Nwere ike zoo, zaghachi, ma ọ bụ mee ihe dị egwu… jiri ohere ịme ihe ga - eme ka ị pụta ìhè. Anaghị m echeta ihe Kanye kwuru, na-abụghị “Imma ka ị gụchaa”. Anaghị m echeta okwu nnabata nke nnabata Taylor. Anaghị m echeta vidiyo nke Taylor. Mmetụta na-adịgide adịgide n'ime ihe niile merenụ, n'echiche m, bụ nzaghachi Beyonce.
Kama ịbụ ndị ụjọ na-atụ ụjọ, ụlọ ọrụ kwesịrị ile anya otu ha nwere ike isi mee ka ndị ọzọ nwee ike site na mgbasa ozi mmekọrịta. Ọzọkwa, ikekwe ọ bụ naanị uwe ahụ. Nkwupụta zuru oke: Echere m na vidiyo Beyonce kwesịrị ịnata onyinye ahụ kwa.
Tags: beyoncekanyedị n'ebe ọdịda anyanwụtaylorTaylor Swift
Ọkt 8, 2009 na 2:11 AM
Hapụ gị ka ị dọrọ ụdị omume ọdịbendị ahụ gaa n'ihu ma tinye ya na mgbasa ozi na mgbasa ozi na mmekọrịta akụ na ụba ọhụrụ a. Jide ka iji!
Ọkt 8, 2009 na 9:14 PM
Ee, ọ bụ izu ole na ole mbubreyo… mana m na-achọ ime nke a post kemgbe ọ mere. Daalụ agwa!
Ọkt 8, 2009 na 12:18 PM
Daalụ maka ịkekọrịta Doug a. Anụrụ m ihe niile gbasara Kanye fiasco, mana anụghị ihe Beyonce mere.
Ọkt 8, 2009 na 9:15 PM
Mmasị ka onye ọ bụla lekwasịrị anya na-adịghị mma, ọ bụghị ya? Echere m na mgbe m na-ele ozi ọma ọ bụ naanị ihe dị ka akụkọ 1 n'ime 3 nke kpuchiri akụkụ dị mma nke akụkọ ahụ!
Ọkt 10, 2009 na 4:22 PM
Doug, mara mma. Ọ bụ ezie na ịnweghị ike ijikwa mkparịta ụka ahụ ọzọ, ndị na-ere ahịa ahịa nwere ike ịmetụta ya. Ọ na-ewe a ọma ndibiat ọnọdụ na mmata chọta mkparịta ụka na-aga gburugburu gị ika na-eme ka onwe gị ugbu a n'ụzọ na-agwa okwu obi ike na mmasị na mkparịta ụka, ma ọ na-akwụ ụgwọ nnukwu oge. Choo Kanyes gi tinye aka na ha!